मोनालिसा के पिकासोले चोरेका थिए ? :: NepalPlus
मोनालिसा के पिकासोले चोरेका थिए ?
क्रिस्टोफर पी जोन्स२०७८ पुष ९ गते ९:५९
अगस्ट २१, १९११ मा, मोनालिसा पेरिसको लुभ्र संग्रहालयबाट हराएकी थिइन् ।
यो एक सोमबार बिहान सबेरै थियो । सङ्ग्रहालयका कर्मचारीको भेषमा आएका तीनजना व्यक्तिहरू पेन्टिङलाई कम्बलमुनि राखेर चुपचाप भागे । तिनीहरू रातभर संग्रहालयमा लुकेका थिए । चोरी भएको चित्रलाई यसको फ्रेम र सिसाबाट मुक्त गरेर तिनीहरू हतारिंदै के दोर्से रेल स्टेशनमा गए । तिनीहरूले बिहान ७:४७ मा रेल चढे। शहर बाहिर निस्किए ।
मोना लिसाको दुस्साहसपूर्ण चोरी तब मात्र पत्ता लागेको थियो जब संग्रहालयका कर्मचारीहरू पेन्टिङ झुण्डिएको कोठा ‘सालों क्यारे’ अर्थात् लम्बाई चौडाई बराबर भएको कक्ष प्रवेश गरे । र पर्खालमा अलिकति खाली भाग फेला पारे । त्यहाँ चारवटा फलामका खम्बाहरू थिए जहाँ ति एक अर्कामा बाँधिएका थिए ।
जब अलार्म बजेको आवाज बाहिर निस्कियो प्रहरीहरु संग्रहालयमा पुगे । ढोकाहरू बन्द गरिएका थिए । कर्मचारी र आगन्तुकहरूलाई हिरासतमा राखियो । तर त्यतिन्जेल पेन्टिङ शहर बाहिर पुगिसकेको थियो । मोनालिसाको पेन्टिङ बेपत्ता भएपछि फ्रान्सको सीमाना उच्च सतर्कतामा राखिएको थियो । अधिकारीहरूले सीमा पार गर्ने प्रत्येक सवारी साधनको जाँच गरिरहेका थिए ।
न्युयोर्क टाइम्सले घोषणा गर्‍यो “६० गुप्तचरहरुले चोरी गरेको ‘मोना लिसा’ खोज्दै, फ्रान्सेलीहरु सार्वजनिकरुपमा क्रोधित ।” यो समाचार संसारभर फैलियो।
मोटा महिला रुचाउने संसार कहिले देखि किन बदलियो ?
एक हप्ता पछि संग्रहालय पुन: खोलियो । पेरिसवासीहरूको ठूलो संख्या खाली पर्खालको साक्षी बन्न लामबद्ध भयो जहाँ प्रसिद्ध चित्रकला एक पटक झुण्डिएको थियो । यस्तो देखियो कि मोनालिसा हराएको खाली ठाउँको आफ्नै चुम्बकत्व छ । सबैले सोचिरहेका छन् : यो कसरी संभव हुनसक्छ ?
पेरिस-जर्नल अखबारले पेन्टिङ फिर्ता गर्नेलाई ५० हजार फ्रैंक ईनाम प्रस्ताव गरेको थियो । छिट्टै एक कला चोरको सुराकीले प्रहरीलाई देशको सबैभन्दा आशाजनक युवा कलाकारहरू मध्ये एक पाब्लो पिकासो तिर आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्यो ।
सन् १९११ मा पाब्लो पिकासो एक दशकदेखि पेरिसमा बस्दै आएका थिए । त्यतिबेला उनी आफ्नो क्यूबिस्ट अवधिमा आफ्ना साथी चित्रकार र साथी जर्जस ब्राकसँग चिन्तनसिल अवस्थामा बसिरहेका थिए । पिकासोका अन्य साथीहरूमध्ये कवि र लेखक गुइलाउम अपोलिनेर पनि थिए।
धेरै वर्ष अघि पिकासोले ईसापूर्व तेस्रो वा चौथो शताब्दीमा बनाइएका दुई इबेरियन मूर्तिहरूको लागि १०० फ्रान्क तिरेका थिए जुन अपोलिनेरका एक बदमाश सहकर्मीले लुभ्रेबाट चोरेका थिए ।
यी पहिले लुटिएका वस्तुहरूले उनीहरूलाई सम्झौताको स्थितिमा पुर्‍याउनसक्छ भन्ने महसुस गर्दै पिकासो र एपोलिनेर आतंकित भए । तिनीहरूले आफ्नो चोरी गरिएका मूर्तिहरू सुटकेसमा राखेर सेन नदीतिर दौडिए । उनीहरुले त्यसलाई पानीमा फ्याँक्ने योजना बनाए ।
तैपनि तिनीहरू हिचकिचाए र आफ्नो मन परिवर्तन गरे । उनीहरूले पेरिस-जर्नलको कार्यालयमा मूर्तिहरू जम्मा गरे । अखबारले उनीहरूको नाम गोप्य राख्ने छ भन्ने आशामा।
तर त्यसो भएन । केही दिनभित्रै प्रहरीले एपोलिनेरलाई हिरासतमा लियो । र सेप्टेम्बरको सुरुमा पिकासोलाई मजिस्ट्रेटको अगाडि उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो । उनलाई ‘अपोलिनेरलाई चिन्नुहुन्छ ? भनेर सोध्दा चित्रकारले दावी गरे “मैले यो मानिसलाई कहिल्यै देखेको छैन ।”
पिकासोले पछि आफ्नो साथीलाई धोका दिएको क्षण सम्झे “मैले गियोमको अभिव्यक्ति परिवर्तन भएको देखें । उनको अनुहारबाट रगत बग्यो । मलाई अझै लाज लाग्छ ।”
अन्ततः न्यायाधीशले निर्धारण गरे ‘पिकासो र एपोलिनेरले चोरीएको कला स्वामित्वमा लिएतापनि मोनालिसा बेपत्ता हुनुमा तिनीहरूको कुनै संलग्नता थिएन । मुद्दा रद्द गरियो ।
प्रहरीले ठूलो खोजी जारी राख्यो । तर महिनौं बित्यो कुनै सफलता हात लागेन । यो चोरी भएको दुई वर्ष नपुग्दै अल्फ्रेडो गेरी नामक ईटालीको फ्लोरेन्समा रहेको आर्ट डीलरले रहस्यमय रूपमा “लियोनार्डो” ले हस्ताक्षर गरेको एउटा पत्र प्राप्त गरे । पिकासो र एपोलिनेर अन्ततः अपराधसँग सम्भावित सम्बन्धबाट मुक्त भए ।
पत्रमा मोनालिसाको आर्ट पाँच लाख डलरमा बिक्रीको लागि राखिएको दाबी गरिएको छ । त्यसपछि बैठकको व्यवस्था गरियो र हराएको पेन्टिङ अन्ततः पुनर्स्थापित गरियो । लियोनार्दोले गेरीलाई पेन्टिङ उधारो लिन र प्रमाणीकरणको लागि उफिजीमा लैजान अनुमति दिए । गेरीले प्रहरीलाई फोन गर्ने मौका पाए । केहि बेरमै पछि लियोनार्दो (उनलाई भिन्सेन्जो पेरुगिया भनेर चिनिन्छ) गिरफ्तार गरियो । चोरीको मास्टरमाइन्डको रूपमा गिरफ्तार गरिएको थियो । पेरुगियालाई आठ महिनाको जेल सजाय सुनाइएको थियो ।
चोरीको कहानी एक उत्सुकता जगाउने पक्ष हो । यो लुभ्रेमा फिर्ता भएको पहिलो दुई दिनमा कम्तिमा एक लाख २० हजार मानिसहरू पेन्टिङ हेर्न गएको बताइन्छ । यसको चोरी हुनु अघि, मोना लिसाको प्रतिष्ठा महत्त्वपूर्ण थियो । तर संग्रहालयमा भएका अन्य धेरै चित्रहरू भन्दा बढी थिएन । चोरिएर फिर्ता भएछि यसले अत्यन्तै धेरै ध्यान तान्यो । यसलाई सांस्कृतिक प्रतिमामा परिणत गर्‍यो ।
यसैबीच पेरुगिया (भिन्ची) लाई इटालीमा राष्ट्रिय नायकको रूपमा स्वागत गरियो । चित्रकला एक इटालियन कलाकारद्वारा पेन्टिङ भएको हुनाले । यो पेरिसमा रह्यो किनभने नेपोलियनले यसलाई पहिले चोरि गरेका थिए । पेरुगियालाई यो प्रसिद्द कला आफ्नो मातृभूमिमा फर्काउने प्रयासको लागि देशभक्तको रूपमा स्वागत गरियो ।
(मेडियम डटकममा ‘डिड पिकासो स्टील द मोनालिसा ?’ शिर्षकको आलेखलाई नेपालप्लसले नेपालीमा भावानुवाद गरेको हो-संपादक)
संवन्धित लेख अन्य रिपोर्ट